ထျန်းအန်းမင် ရင်ပြင် - ဝီကီပီးဒီးယား
နေ့လယ်ပိုင်း ထျန်းအန်းမင်ရင်ပြင် အနီးတဝိုက် မြင်တွေ့ရသောမြင်ကွင်း
ထျန်းအန်းမင် (အင်္ဂလိပ် Tian'anmen, Tienanmen, T’ien-an Men) သို့မဟုတ် ကောင်းကင်ဘုံ ဂိတ်တံခါး သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းမြို့လယ်တွင် မြို့၏ဗဟိုချက်မ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တရုတ်ပြည်၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အမျိုးသား အမှတ်သင်္ကေတ အဖြစ်လည်းကောင်း တည်ရှိနေသည်။ ယင်းကို ၁၄၂၀ပြည့်နှစ် မင်မင်းဆက် လက်ထက်မှ စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ တားမြစ်မြို့တော်နှင့် ပင်မနန်းတော်ဆီ ဦးတည်နေသော မြို့၏ တောင်ဘက် နန်းမြို့ရိုး ဂိတ်ဝလည်း ဖြစ်သည်။ ရင်ပြင်တွင် ပြည်သူ့ သူရဲကောင်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦ၊ ပြည်သူ့ခန်းမဆောင်တို့ တည်ရှိသည်။ တရုတ်အမျိုးသားပြတိုက်နှင့် ဥက္ကဋ္ဌကြီး မော်၏ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦသည်လည်း ၎င်းအနီးအနားတွင် တည်ရှိနေသည်။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်စီတုန်းသည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကို စတင်တည်ထောင်ကြောင်း ယခုရင်ပြင်၌ ကြေညာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထျန်းအန်းမင်ရင်ပြင်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြို့တော်ရင်ပြင် ၁၀ခု အနက် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ (၄၄၀၀၅၀၀ မီတာ ၂ - ၈၈၀ × ၅၀၀ မီတာ သို့မဟုတ် ၁၀၉ acက - ၉၆၀ × ၅၅၀ yd) အကျယ်အဝန်းရှိသည်။ ၎င်းသည် တရုတ်ပြည်သမိုင်းတွင် အရေးပါသောဖြစ်ရပ်များစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောနေရာ ဖြစ်သောကြောင့် တရုတ်ပြည်၏ သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရ အရေးပါသော နေရာတစ်နေရာအဖြစ် တည်ရှိနေသည်။ သို့သော် ထျန်းအန်းမင်ရင်ပြင်သည် တရုတ်ပြည် ပြင်ပတွင်မူ ထျန်းအန်းမင် သတ်ဖြတ်မှု သို့မဟုတ် ဇွန် ၄ အရေးအခင်း ကြောင့် ထင်ရှားသည်။
အဆိုပါ ထျန်းအန်းမင် ( "ကောင်းကင်ဘုံ ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါး") မြို့ရိုးအတွင်းတံခါးဝအနီး ရင်ပြင်ဖြစ်သည်။ ယင်အား မင်မင်းဆက် လက်ထက် ၁၄၁၅ကာလအတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၇ ရာစုတွင် Li Zicheng ၏သူပုန်တပ်ဖွဲ့များနှင့် မန်ချူး ချင်းမင်းဆက် ၏တပ်များ အကြားတိုက်ခိုက်မှုများ သည်ဂိတ်တံခါးကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ထျန်းအန်းမင် ရင်ပြင်ကို ၁၆၅၁ခုနှစ် တွင်ဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ခုနှစ်တွင် လေးဆကျယ်ဝန်းလာခဲ့သည်။
(video) Two shots of the namesake gate to the north followed byashot of inside Tiananmen Square, 2017.
သမိုင်းဝင်ဂရိတ်ဂိတ်တံခါးဝဟုသိကြသောဂိတ်သည် ဧကရာဇ်မြို့တော် တောင်ဘက်ဂိတ် သည် စတုရန်ပုံ မြို့၏ဗဟိုချက် ကျသော နေရာတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းကို ချင်း မင်းဆက်တွင် ကြီးမြတ်သော ချင်း ဂိတ် နှင့် ရီပတ်ဘလီကန်ခေတ် တွင် တရုတ်ပြည်၏ဂိတ် ဟုအမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထျန်းအန်းမင် နှင့် ရှောင်အန်းမင် ဂိတ်များ ကဲ့သို့ ပေကျင်းရှိအခြားဂိတ်များနှင့်မတူသည်မှ ာ၎င်းသည် အခမ်းအနားကျင်းပသည့် ဂိတ်တံခါးပေါက်ဖြစ်သည်။ မုဒ်ဂိတ်များသုံးခုရှိသော်လည်း မြို့ရိုးတံခါးများ မင်သင်္ချိုင်းဂူ တွင်တွေ့ရသောအခမ်းအနားတံခါးများနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းတံခါးသည်အထူးသဖြင့်“ Gate of the Nation” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့်အခါ ပိတ်ထားလေ့ရှိပြီး ဧကရာဇ်ဖြတ်သန်းသွားလာမှ ဖွင့်လေ့ရှိသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် အသွားအလာကို အနောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်စွန်းရှိဘေးထွက်တံခါးများသို့အသီးသီးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
၁၈၆၀ တွင် ဒုတိယဘိန်းစစ်ပွဲအတွင်း ဗြိတိသျှနှင့်ပြင်သစ်စစ်တပ်များ ဘေဂျင်းကိုကျူးကျော်သောအခါ ဂိတ်တံခါးဝနားတွင် စခန်းချကာ ဂိတ်တံခါးနှင့်တားမြစ်ထားသောမြို့တော်တစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ပစ်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် တားမြစ်ထားသောမြို့တော် ကိုနှမြော၍ နွေရာသီနန်းတော်ဟောင်း ကိုသာ မီးရှို့ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ထျန်းအန်းမင်ရင်ပြင် မြို့ရိုးမှ မြင်တွေ့ရသော မြင်ကွင်းကျယ် မြင်ကွင်း
↑ Tiananmen Square။2June 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Miles၊ James။ "Tiananmen killings: Were the media right?"၊ BBC News၊2June 2009။3November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Tiananmen Square protest death toll 'was 10,000'"၊ BBC News၊ 23 December 2017။3June 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tiananmen Square။ Britannica Concise Encyclopedia. 2007။ 2008-08-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထျန်းအန်းမင်_ရင်ပြင်&oldid=677050" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၂:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။